चीनमा कीराहरू तालुको लागि रमाईलो छ यात्रा समाचार
चीनमा कीराहरू तालुको लागि रमाइलो हुन्छन्
मारिएला क्यारिल | | पर्यटन गन्तव्यहरू, Gastronomy, एशिया यात्रा
मलाई व्यावहारिक रूपमा केहि पनि खान मन छ। मलाई लगभग सबै मनपर्दछ र म संसारमा कुनै पनि ग्यास्ट्रोनोमीलाई घृणा गर्दिन। सिद्धान्तमा, किनकि मलाई लाग्छ कि कीराको स्वाद लिन सक्दिन। मलाई थाहा छैन ... तपाईं के गर्नुहुन्छ? कीराहरू चिनियाँ भोजनमा अवस्थित छन्, सबैमा होईन, तर विशेष रूपमा केही क्षेत्रहरूको ग्यास्ट्रोनोमीमा।
चीनियाँ खानाहरूमा धेरै मौलिक हुँदैनन्, कि, तिनीहरू केवल एक मात्र छैनन्। यसबाहेक, हजारौं वर्षदेखि मानिसहरूले कीराहरू खाइरहेका छन्। के तपाइँ चीन जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसोभए मलाई आफैं बताऊ कि त्यहाँ कीराहरू टाँस को लागी एक व्यंजन हुन्छ.
1 कीराहरू खाँदै
2 चिनियाँ खाना र कीराहरू
चिकित्सा सर्तमा कि यसलाई एन्टोमोगाफिया भनिन्छ। मानव प्रजातिले हजारौं बर्षदेखि कीराहरू खाएको छ, अन्डा, लार्भा र वयस्क कीराहरू प्रागैतिहासिक कालदेखि नै हाम्रो खानामा गणना गरिन्छ र धेरै संस्कृतिहरूमा तिनीहरू अझै सम्म भान्साकोठामा उनीहरूको अध्याय छ।
विज्ञान को बारे मा थाहा छ कीराका हजार प्रजातिहरू जुन मानिसहरूले खाए सबै महाद्वीपमा विश्वको of०% राष्ट्रहरूमा। जबकि केही संस्कृतिमा यो सामान्य छ, अरूमा यो निषेधित वा वर्जित छ र अरूमा यो निषेधित छैन तर अत्यन्त घृणित कुरा हो।
के कीराहरू खान योग्य छन्? सूची लामो छ तर त्यहाँ पुतली, दीमक, माहुरी, भेंडा, ककरोच, टिभी, पतंग, क्रिकटका धेरै प्रजातिहरू छन्। कीराहरू खाने यसको फाइदा र बेफाइदाहरू छन्, त्यहाँ पर्यावरण र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाहरू छन्, तर सबै कुरा हेरचाह र स्वच्छता चाहिन्छ।
कहिलेकाहिँ कसैले सोच्न सक्छ कि कीरा खाने भनेको गरिबीसँग सम्बन्धित छ, तर यो त्यस्तो विचार हो जसको कुनै आधार हुँदैन। विचार गरौं कि भारत एकदम गरिब देश हो र यसको जनसंख्या शाकाहारी छ, यसले कीराहरू खाँदैन। के तपाईंलाई थाहा छ सब भन्दा कीरा खाउने देश थाईल्याण्ड हो? हो, यससँग 50० मिलियन डलरको उद्योग छ जुन बगका वरिपरि घुम्छ।
चिनियाँ खाना र कीराहरू
चीन एक धेरै ठूलो देश हो र यो धेरै भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित छ र प्रत्येकले हातमा भएका सामग्रीहरूमा आधारित खाना पकाउनको आफ्नै शैली विकसित गरेको छ। जबकि दक्षिणी खाना चावलमा बढी निर्भर गर्दछ, उत्तरी खानाले बढी गहुँ प्रयोग गर्दछ, एउटा उदाहरण मात्र दिनुहोस्।
भाग्यवस, यदि तपाइँ केहि घृणा गर्नुहुन्न र तपाईं चीनमा कीरा खान चाहनुहुन्छ तपाईं बेइजि itself मा नै यो गर्न सक्नुहुन्छराजधानी। यो होइन कि कीराहरू खाने भनेको टाढा टाढाबाट आएका पहाडहरूमा हराएको हो।
यसका लागि एक आदर्श साइट हो वांगफुजिंग नाइट मार्केट जो डो Dongचेng जिल्लामा अवस्थित छ। यो ग्यास्ट्रोनमिक र व्यापारिक स्टालले भरिएको एउटा सडक हो, जुन शहरको सबैभन्दा प्रसिद्ध छ।
भान्छाकोठामा समर्पित अंश वाang्गफुजिंग स्ट्रिटको एक हो र यो वास्तवमै अनौंठो छ। यो रातको बजार र एपिरेटिफको सडकमा विभाजित छ। दुबै खानालाई ग्राहकले पर्दाफास गरेका छन् र दुबै चिनियाँ र पर्यटकहरूसँग लोकप्रिय छन्।
धेरै जसो खाना हो ग्रिलमा पकाइएको, आगो माथि, वा भुटेको वा स्टीम र सामान्य रूपमा तपाईले पकाउने विधि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुखुरा, भेजीहरू, च्याउ, कमल रुट, टोफु, शेलफिश, र डराउनुपर्ने केहि पनि छैन ... जबसम्म तपाईं बगहरूमा पुग्नुहुन्न।
र त्यहाँ, घृणित बिना, तपाईंले टुथपिक्समा कीराहरू देख्नुहुनेछ। बगहरू र अधिक बगहरू र व्यक्तिहरू जसले उनीहरूको मुखहरू भरिन्छ उनीहरूको पौष्टिक सामग्री, प्रोटीन र खनिजहरूको फाइदा लिएर। कीराहरू खान हामीलाई पक्कै गाह्रो छ, हाम्रो संस्कृतिले तिनीहरूलाई मार्न खोज्छ ...
मलाई थाहा छैन, खाऊ बिच्छी, रेशम कीरा pupae, परजीवी, फ्राइड centipedes, र माकुरा यो तपाईको ग्यास्ट्रोनोमिक जीवनको साहसिक हुन सक्छ। यो तिमीमा भर पर्छ। जसले यी चीजहरूको प्रयास गरेका छन् भन्छन् कि उनीहरूले यति नराम्रो स्वाद चाख्दैनन्, यो केवल यो हो कि तपाईको मस्तिष्कले तपाईलाई सँधै समय बताउने चाल खेल्छ कि तपाई बगहरू खाँदै हुनुहुन्छ ... गिमी वा क्रन्ची, तर बग।
तर धेरै चिनियाँहरूले यसलाई मन पराउँछन्। जे भएपनि, खाना बिल्कुल सांस्कृतिक छ। यदि तपाईं यस बजारको भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई वान्फजुujको उत्तरी छेउमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
बेइजि inमा मात्र होइन तपाई कुखुरा पनि खान सक्नुहुन्छ। चीन fifty० भन्दा बढी जातीय समूहहरू मिलेर बनेको छ र हान हान बहुमत भएता पनि त्यहाँ अरू धेरै छन्। जिing्गपो जातीय समूह, उदाहरणका लागि, कीरा खानका लागि प्रसिद्ध छ। यदि तपाईं कुनमिंगमा हुनुहुन्छ भने, खान बगहरू भनियो!
यहाँ उनीहरू खान्छन् फ्राइड टिभी, खुट्टा र पखेटा सहित cicadas, नारियल लार्वा र केही कालो बग औंठी को आकार। कीराहरू समेट्नको लागि सिफारिश गरिएको रेस्टुरेन्ट सिमाओ येकाई गुआन हो। मेनूमा मैले भर्खर उल्लेख गरेको सबै चीज छ र कीराहरूमा प्रति दिन १ e० भन्दा बढी यूरो बेच्ने कुरामा गर्व गर्दछ।
कुन्मि gast प्रत्येक दिन थाइल्याण्डको नजिकै आउँदैछ किरा कीरामीको रूपमा, साथै रेष्टुरेन्टहरू र मानिसहरूलाई उनीहरूको घरमा कीरा खाइरहेका छन्। त्यहाँ स्टोरहरू छन् जुन बिभिन्न प्रजातिहरूमा विशेषज्ञता छ र तिनीहरूलाई ताजा र स्थिर बेच्दछ।
उदाहरण को लागी, तपाई किन्न सक्नुहुन्छ युन्नान तान्ने लार्भा २ 23 र 38 XNUMX युरो प्रति किलोको लागि र प्रति वर्ष यस प्रजातिको बजार केवल about२०,००० डलर सार्दछ। कुनै नराम्रो छैन। र यो बढ्न जारी छ। चीनको सबैभन्दा ठूलो कीरा खेती गर्ने किनियुआन काउन्टीमा करीव २०० कीरा फार्महरू छन्। र प्रति वर्ष met०० मेट्रिक टन उत्पादन गर्दछ।
तथ्य यो हो कि चीन एक त्यस्तो देश हो जसले जनसंख्यालाई खाना पुर्‍याउँछ जसको अन्तिम जनगणना, २०१० मा गरिएको थियो, १ 2010० भन्दा बढी बासिन्दाहरू भन्दा कम र केही पनि देखिएन। र यो बढ्न जारी छ। त्यसैले यदि कीराहरूले खाद्यान्नको लागि मागको एक बिट आपूर्ति गर्न सके, स्वागत छ।
अर्को चाखलाग्दो पक्ष त्यो हो केही विज्ञहरू भन्छन कि अहिले यो देशमा विशाल कीराहरू उपभोग गर्न तयार छैनयद्यपि उद्योग वातावरणप्रति दयालु छ र यसले स help्कटमा मद्दत गर्दछ। किन? को मुद्दा स्वच्छता सुरक्षा।
चीनसँग अझै पनि यस विषयमा जाने बाटो छ, यसले कम्तिमा एउटामा पुग्नै पर्छ खाद्य सुरक्षा मानक कीरालाई खानाको रूपमा प्रमोट गर्नु भन्दा पहिले। हामी त्यो बिर्सन सक्दैनौं केही कीराहरूमा विष, कीटनाशक अवशेष र ब्याक्टेरिया हुन्छन् र त्यो खाना पकाउने विधिहरू कहिलेकाँही यी खतराहरू हटाउनको लागि पर्याप्त हुँदैन।
चिनियाँ कुकहरू, सडक स्टालहरू र रेस्टुरेन्टहरूका लागि जिम्मेवारहरू, सामान्यतया खाना सुरक्षा शिक्षित मानिसहरु हुन्। उनीहरूको धारणा छ कि यदि बिच्छी र गँड्यौलाको लार्भा परम्परागत चिनियाँ औषधीमा प्रयोग गरियो भने तिनीहरूलाई खानेमा कुनै समस्या छैन। यदि तिनीहरू राम्रो तापमानमा पकाइएको छ भने, त्यो पर्याप्त छ।
सत्य यो हो कि यदि केहि पनि तपाइँलाई डराउँदैन र तपाइँ बगहरू खान चाहानुहुन्छ, चीन राम्रो गन्तव्य हो किनभने यहाँ ती टाँकाको खाना हुन्। तपाईँको भोजनको मज्जा लिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Gastronomy » चीनमा कीराहरू तालुको लागि रमाइलो हुन्छन्
मारिया Lelala Alvarez प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
चीनले मलाई सबै रिप्रिडिओ र डिस्कस उत्पादन गर्दछ। तिनीहरू एनिमल, विशेष कुकुर र बिरालाहरूमा यस्तै क्रुयल बन्नका लागि उपयुक्त छन्। संस्कृति भनेको के हो? वा यसलाई आवाश्यक हुन्छ? यदि त्यसो हो भने, कोलम्बियामा हामीसँग धेरै मूल्याAT्कनहरू छन् अन्तरनिश्चय गर्नका लागि… जब तिनीहरू यहाँ लिन्छन् तिनीहरू तपाईं द्वारा टन्सहरू प्रदान गर्न सक्छन् उनीहरूको सदस्यता लिन!
हामी तपाईंको व्यवहारलाई घृणा गर्दछौं! हाम्रो देश बाहिर चिनियाँ! तिनीहरू वर्ड टेंडरनेसलाई चिन्दैनन्, उनीहरूलाई थोरै कुरा थाहा छ र धेरै एनिमेल्सको मूल्यवानता र वफादारी ...
फेरि हामी तपाइँको कस्टम्सलाई पुनर्भरण गर्‍यौं!
मारिया Lelala Alvarez लाई जवाफ दिनुहोस्
चीन त्यो देश हो जुन धेरै सुस्त कस्टम्सको लागि प्रतिबद्ध छ। जब तपाईं हामी उनीहरूलाई उपभोक्ता गर्न को लागी धेरै रेटहरू निर्यात गर्न चाहानुहुन्छ, तर कृपया यो प्रकृतिबाट उपहारको रूपमा त्यस्तो क्रुर नहुनुहोस्। तपाईं शब्द वफादारी, दया र अनुकम्पा के हो भनेर थाहा पाउँदैनौं जुन हामी धेरै वस्तुहरूबाट सिक्छौं।
तपाईं अरू देशहरूमा जानुहुँदा एक नकारात्मकता महसुस हुन्छ। तिनीहरू पशुहरूलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि कृतज्ञ आन्तरिक छैनन्।… कल्पना गर्नुहोस् कि कसरी तपाईं अपभ्रष्ट हुनुहुन्छ! GROSS!
उनीहरूले चीनलाई खण्डन गर्न भन्छन मेरो प्रश्न हो, के तपाईं ढु stones्गा वा जरा खानुहुन्छ? के तपाईंले महसुस गर्नुहुन्न कि तपाईंले पनि गाई-मासु, सुँगुर, भेनिस, खरायो, कुखुरा, एस, टर्की, माछा, झिंगे, चालाइन्स, क्र्याबहरू, काराकोल, उनीहरू खानुहुन्छ? सबै जनावरहरू हुन्छन् भने तपाईले कसैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न बाइबललाई अस्वीकार गर्न यो भनिएको छ कि एक इसाई भएकोले घातक चीजहरू खान सक्छन र त्यसले उसलाई नोक्सान गर्दैन किनकि भगवानले उसको रक्षा गर्नुहुनेछ।
मकिनालाई जवाफ दिनुहोस्
एड्रियन जोस गुएवरा भन्यो
तपाईले भनेको कुरा पूर्णतया तर्कसंगत छ, हामी आफैंलाई "सामान्य" ठान्छौं धेरै जिवंत प्राणीहरु संग चरम क्रूरताका कार्यहरु गर्छौं जसबाट उनीहरु विकृत रूपमा शोषण गर्छन् र कुनै पछुतो बिना। मलाई लाग्छ कि समाजले अगाडि बढ्नुपर्दछ र बानीहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ जसले कुनै पनि जीविकाको लागि जीवनलाई रमाइलो बनाउँदछ, कीराले मलाई यी बानीहरू बदल्न र स्वस्थ र दिगो खाद्यान्न विकल्पहरू खोज्नको लागि एक उत्तम विकल्प देखिन्छ, ग्रहमा भएका सबै प्रभावहरूको उल्लेख नगर्न। मानिसहरुले बाँच्नको लागि बनाउने वधलाई मार्ने सर्तहरू।
म तपाईंलाई यो भिडियो छोड्दछु जसले तपाईंलाई यो देखाउँदछ कि पश्चिमीहरू यसको लागि सबै भन्दा राम्रो उदाहरणहरू छैनन्।
Adrian Jose Guevara लाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो फ्रान्सिस्को जिमेनेज गिल भन्यो
यो प्लेजी किन हो। बाहिर, हाम्रो देश बाट खराब चिनियाँ। हामी एनिमल दुर्व्यवहारको विरुद्धमा छौं!
किन ती देशहरूमा धेरै नै प्रशस्त छ, किन कि तपाईं कुकुर र बिरालाहरूप्रति निर्दयी हुनुहुन्छ ...
पाब्लो फ्रान्सिस्को जिमेनेज गिललाई जवाफ दिनुहोस्
मेरीसोल मेक्सिको, DF भन्यो
तपाईं एकदम सहि हुनुहुन्छ ... ezo de komer एनिमेज एज खराब loz animalez x ke lo uniko ke lez ez ke kez Iz mizmoz ze tragen ... र वास्तवमा ईज मात्र हराइरहेको चीज ..
मेरीसोल मेक्सिको, DF लाई जवाफ दिनुहोस्
के खराब खराब छ तपाईले लेख्नु भएको तरिका, तपाईले बिच, .. एउटा किताब पढ्नुहोस् र म्यागजिनहरू नहाल्नुहोस् जहाँ जस्टिन बिबर हिंड्दछ,
Piticli लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको हिज्जेका अतिरिक्त के खराब छ (र मैले भनेको छैन मेरो सिद्ध छ), के तपाई चिनियाँको आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो देशबाट आएको जुन गरिब र निर्दोष बुल्सलाई रमाइलोको लागि मार्छ।
मेक्सिको DF बाट Mersol भन्यो
मेक्सिको DF बाट Marysol लाई जवाफ दिनुहोस्
यो त्यो कारणले हो, वा टेक्टोनिक प्लेटहरूको चालहरूको कारणले हो, तर कसले जान्दछ, हैन।
वा हो, हामीले यो मान्नुपर्दछ कि यो तपाईको कुराले गर्दा भएको हो, यसले अझ धेरै समझदारी बनाउँदछ
अजज्जा कसरी अज्ञानी, तपाईले खानु, सुँगुर, गाई, कुखुरा, आदि, के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। र के तपाई दु: खी हुनुहुन्छ? होइन !!!
मार्सेलालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको लागि मारिया लेला अल्भारेज, चिनियाँहरू अत्यन्त निर्दयी हुनेछन् र मलाई के थाहा छैन, तर यो कुरालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन कि हामी एशियाियनहरू तपाईको सबै ल्याटिनोभन्दा शक्तिशाली छौं, चाहे आर्थिक बुद्धिको बारेमा होस् वा त्यसले हामीलाई असर गर्दैन। तपाईको राय र मलाई तपाईलाई केहि सल्लाह दिन दिनुहोस्, तपाई जस्ता कमजोर व्यक्तिहरु कहिले कि त आर्थिक वा दिमागमा बढ्दैनन्, प्रिय, हामी गर्छौ ... र म तपाईलाई शर्त दिन्छु कि पेंसिल पनि, इरेजर, पेन, नोटबुकहरु , तपाईले स्कूलको समयमा प्रयोग गर्नुहुने सबै कुरा र तपाईले हालै तपाइँको कम्प्युटर प्रयोग गरिरहनु भएको चीज चीन, तैवान वा जापानीमा बनाइएको हो। आमासँग तपाईको टाउको प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाइँसँग दिमाग छ वा तपाइँसँग जे रिकोटा छ त्यसले केही फरक पार्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यदि हामी राम्रो छौं भने, लामो समयसम्म CHINAAAAAAAAAA LIVE। aaaaaa मैले तपाईंको जातिवादको लागि ALLELUYAAA बिर्सें। प्रेमले चुम्बन गर्दछ।
एन्टोनिनीलाई जवाफ दिनुहोस्
मार्बेला गार्सिया भन्यो
तपाईंले भनेको धेरै कुरामा तपाईं सही हुनुहुन्छ। Butooo, किन भ्रुणहरू खान?
मार्बेला गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
महान् बिच किन एलजेड पारियोको धिक्कार छ छोराहरू म अरू सबै खाउँदछु र उनीहरूको जातीय रोगले मरे कश्मीरको एस्कूबुकूक खराब छ !!! र तपाईंले कुकुर वा बिरालाहरू K ASCO खानु हुँदैन !!! तिनीहरू बिरामीहरू हुन् !! EDIBLE SHIT केही खानुहोस् !!
ZelenA लाई जवाफ दिनुहोस्
फर्नांडो मार्टिनेज मार्टिनेज भन्यो
मलाई थाहा छ कि म यस ग्रहको हुँ। पूर्वीय अभ्यासहरू, जस्तै खपतको लागि जनावरहरूको बलिदान र यातना दिने, यसले मलाई गहिरो चोट पुर्‍याउँछ। श्रीमती मारिया Leyla बिल्कुल सही छ। म गुआडालाजाराबाट हुँ र मलाई थाहा छ कि संसारको कुनै पनि देशबाट धेरै जसो हामी यी चलनहरूलाई खण्डन गर्छौं। जे होस् उनीहरूको टेक्नोलोजी उन्नत छ, किनकी तिनीहरू पूर्ण रूपमा ड्रेज छन्।
फर्नान्डो मार्टिनेज मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
हो निस्सन्देह, किनभने हामी पक्का हुन सक्छौं कि तपाईंको देशमा तिनीहरूले कुनै पनि पशु मार्दैनन्, त्यहाँ कुनै शिकार छैन, माछा मार्छ, वा गाईवस्तु वा सुँगुर वा चराहरूको पालनपोषण गर्छ र मार्छ, सुपरमार्केटमा टोकरीमा बेच्छ र त्यसपछि खाइन्छ। कसै द्वारा; किनभने तपाईंको देशमा एकल म्याकडोनाल्ड छैन र यदि छ भने, यसले शाकाहारी खाना मात्र बेच्छ।
र किनभने ग्वाडालाजारा त्यस्तो देशमा छैनन जसले साधारण रमाईलो र मनोरन्जनका लागि बुल्सलाई मार्दछ।
मारिसोल डिमास भन्यो
Marisol Dimas लाई जवाफ दिनुहोस्
मित्र, तर यदि तिनीहरू पहिले नै आफैं खाए, के तपाईंलाई थाहा थिएन कि चिनियाँहरूले "भ्रुणहरू" खान्छन्?
सुरुमा, यो झूट हो, तिनीहरूले भ्रुणहरू खाँदैनन्।
दोस्रो, जनावरहरूप्रति क्रुरता, तर के दोहोरो स्तर, यदि तपाईंले सम्पूर्ण जातीय समूह वा देशको अपमान गर्न लाग्नुभएको छ किनकि केहीले कुकुर र बिरालोहरू खाए भने, त्यसो भए मलाई लाग्छ कि तपाईं बस्नुहुने देशमा, सबै शाकाहारीहरू हुन्।
हो, किनकि अब फेला परेको छ कि गाई, कुखुरा, सुँगुर र माछा मर्नु पर्छ र त्यसपछि कसाई, पकाइन्छ र मानिसहरूले खान्छन्; किनभने गाई, कुखुरा, सुंगुर र माछाहरू जुन संसारभरि प्रत्येक दिन मर्दछ भोजन हुनको लागि जीवनको अधिकार कहिल्यै थिएन: / (SARCASM !!!)
त्यसोभए किन हामी चिनियाँहरूको आलोचना गरौं किनकि यहाँ हामी सबै शाकाहारी हौं, किनकि हाम्रो देशहरूमा कसैले मासु खान्दैन र हामी सबै जनावरहरूको जीवनको मोल गर्छौं। अर्जेन्टिना किन सबै भन्दा राम्रो मासुको बारेमा घमण्ड गर्दैन; किनभने ब्राजिलले गाईवस्तु पाल्नुका लागि अमेजनलाई वनमा राख्दैन; किनभने पेरूले सिभिस बनाउँदैन र यदि यो गरेमा यसले कुनै पनि पशु मार्ने बिना माछा मार्नेछैन। किनभने मेक्सिकोमा त्यहाँ कुनै बैलफाइटरहरू छैनन् र सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिकामा मासुसँग सम्बन्धित कुनै उद्योग छैन।
मलाई लाग्छ कि चिनियाँ र एशियाली संस्कृति अद्भुत छ, तिनीहरू सुपर बुद्धिमान र सबै चीजमा समृद्ध छन्, तपाईले कसैलाई फरक पाक संस्कृति भएकोमा वा सबै प्रकारका जनावरहरू खाएकोमा तुच्छ मान्न सक्नुहुन्न किनकि पश्चिमी र दक्षिण अमेरिका दुवैले एक अर्का गाई सुँगुरको कुखुरालाई मार्छन्। , माछा, गरीब मानिसहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार छैन, dible छोड्नुहोस्
Natacha लाई जवाफ दिनुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिकामा कुन शहरहरू भ्रमण गर्ने